Sida loo Bilaabo Podcast-ka Ganacsigaaga (Iyada oo Casharro Iga Bartay!) | Martech Zone
Sida loo Bilaabo Podcast-ka Ganacsigaaga (Casharro Iga Bartay!)
Khamiis, Maarso 4, 2021 Khamiista, Sebtember 30, 2021 Douglas Karr
Markii aan bilaabay qoraalkayga sanado ka hor, waxaan lahaa saddex ujeeddo oo kala duwan:
Authority - anigoo wareysanaya hogaamiyaasha warshadeyda, waxaan rabay inaan magacayga ogaado. Xaqiiqdii way shaqeysay waxayna u horseedday fursado aan caadi aheyn - sida ka caawinta wada-martigelinta barnaamijka 'Podcast' ee loo yaqaan 'Dell's Luminaries Podcast' taas oo keentay 1% ugu sarreeya ee barnaamijyada dhegeysiga badankood la dhageysto intii ay socdeen.
Rajooyinka - Arrintan ka xishoon maayo… waxaa jiray shirkado aan rabay inaan la shaqeeyo maxaa yeelay waxaan arkay dhaqanka ku habboon xeeladayda iyo tahooda. Way shaqaysay, waxaan la shaqeeyay shirkado layaab leh, oo ay ku jiraan Dell, GoDaddy, SmartFOCUS, Salesforce, Liiska Angie… iyo in ka badan.
Voice - Markii podcast-kaygu sii kordhayay, waxay i siisay fursad aan tooshka kula wadaago hoggaamiyeyaasha kale ee warshadayda karti iyo kor u kaca laakiin aan si fiican loo aqoon. Kama xishoonayo inaan doonayo inaan ka dhigo Podcast-ka mid loo dhan yahay oo kala duwan si loo wanaajiyo aragiisa oo loo gaaro.
Taasi waxay tiri, ma sahlana! Casharrada laga bartay:
dadaal - dadaalka cilmi baarista, soo saarida, daabacaada, iyo kor u qaadida waxyaabaha ay qaadaneyso ayaa aad uga dheer xaqiiqda wareysiga. Marka boodhadhka 20-ka daqiiqo ah wuxuu qaadan karaa 3 illaa 4 saacadood oo waqtigayga ah si aan u diyaariyo oo u daabaco. Taasi waa waqti xasaasi ah oo ka baxsan jadwalkayga waxayna igu adkaatay inaan sii wado xawaaraha.
Hawl-wadeenada - Sida ay u shaqeeyaan baraha wax lagu qoro iyo warbaahinta bulshada, ayaa sidoo kale loo sameeyaa Podcasting. Markaad daabacdo, waxaad kasbataa dhowr qof oo raacsan. Raacitaanka soo socdaa wuu korayaa wuuna korayaa… marka xawaaruhu wuxuu muhiim u yahay guushaada. Waxaan xasuustaa markaan lahaa boqol dhegeyste, hadda waxaan haystaa tobanaan kun.
Qorshaynta - Waxaan aaminsanahay inaan badin karo gaaritaankeyga haddii aan si kas ah ula jeedo jadwalka qoraalkayga sidoo kale. Waxaan jeclaan lahaa inaan horumariyo kalandarka maadada si, sanadka oo dhan, waxaan diirada u saaray mowduuc gaar ah. Bal qiyaas Janaayo Oktoobar oo ah bisha ganacsiga e-commerce si khubaro ay isu diyaarinayaan xilliga soo socda!
Maxay Tahay Inay Meheraddaadu Bilaabato Podcast?
Tusaalooyinka aan kor ku soo qaatay ka baxsan, waxaa ku jira xoogaa qasab ah tirakoobka korsashada Podcast taasi waxay ka dhigeysaa mid dhexdhexaad ah oo qiime leh.
37% dadka ku nool Mareykanka waxay dhageysteen Podcast bishii la soo dhaafay.
63% dadku waxay iibsadeen wax marti-qaade podcast ah oo lagu dallacsiiyay barnaamijkooda.
Marka la gaaro 2022, waxaa lagu qiyaasayaa in dhageysiga Podcast-ka uu u kori doono 132 milyan oo qof oo ku nool Kalidii Mareykanka.
Ganacsiyeedka.co.uk, maalgelinta ganacsiga, iyo amaahda cilmi baarista iyo shabakadaha macluumaadka ee daabacaadda ee Boqortooyada Midowday, waxay qabataa shaqo la yaab leh oo kugu socota adiga oo dhex maraya wax kasta oo aad u baahan tahay si aad kor ugu qaaddo barnaamijkaaga. Xogta, Tilmaamaha Ganacsi Yar ee Bilaabida Podcast wuxuu ku dhex socdaa tillaabooyinka muhiimka ah ee soo socda… hubi inaad gujiso boosta ay ku darayaan tan kheyraad ah!
Dooro a mowduuca adiga kaliya ayaa bixin kara… hubi inaad raadiso iTunes, Spotify, SoundCloud, iyo Google Play si aad u aragto inaad tartami karto iyo inkale.
Xaq u hel makarafoonka. Fiiri aniga istuudiyaha guriga iyo talooyinka qalabka halkan.
Baro sida loo edit aad Podcast isticmaalaya tafatirka software sida Maqalka, Garageband (Mac kaliya), Aqoonsiga Adobe (wuxuu la socdaa Adobe's suite daruur hal abuur leh). Waxaa sidoo kale jira tiro sii kordheysa oo ah barnaamijyo iyo barnaamijyo internetka ah!
Diiwaangeli Podcast-kaaga sida a video si aad ugu shubi karto Youtube. Imisa qof ayaad layaabi laheyd dhagaysan ilaa Youtube!
Hel martigelin si gaar ah loogu dhisay boodhadhka. Podcasts-ka waa weyn yihiin, faylal qulqulaya iyo server-kaaga caadiga ah ayaa ku dhegi doona bandwidth-ka lagama maarmaanka ah.
Waxaan haynaa qodob qoto dheer oo ku saabsan halka loo socdo martigeli, shirkad, oo kor u qaad podcast-kaaga taasi waxay faahfaahin ka bixinaysaa dhammaan marti-geliyeyaasha kala duwan, isku-xidhka, iyo kanaalada dhiirrigelinta ee aad ka faa'iideysan karto.
Go-to Kheyraad kale oo aniga ila ah (oo leh podcast weyn) ayaa ah Shirkadda Brassy Broadcasting. Jen wuxuu ka caawiyay kumanaan dad ah inay bilaabaan oo ay dhisaan istaraatiijiyaddooda podcasting-ka ganacsiga.
Oh, oo hubi inaad iska qorto Martech Zone Wareysiyo, my Podcast!
Bixinta: Waxaan isticmaalayaa xiriiriyeyaal ku xiran maqaalkan.
Tags: sida loo bilaabo Podcasttafatirka Podcasttifaftireyaasha Podcastmakarafoonka Podcasttirakoobka Podcastxeeladaha Podcasttalooyinka Podcasttalooyinka dejintabilaabi Podcast
Duubista iMovie oo leh Kaamirada Webka iyo Microphone kala duwan